हाम्रो भान्सा यसरी बन्दैछ विष भण्डार ?::Online News Portal from State No. 4
हाम्रो भान्सा यसरी बन्दैछ विष भण्डार ?
तपाईं र हाम्रो भान्सामा आलु, काउली, साग, गोलभेडा, फलफूल जे–जति खानेकुरा छन्, अधिकांश जैविक होइनन् । किनभने जहाँबाट ति खानेकुरा हाम्रो भान्सामा खपत हुन्छ, त्यहाँ अनेकन रासयनिक मल, विषादी आदिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । अहिले व्यवसायिक हिसाबले गरिने खेतीबालीमा रासयनिक मलखाँद र विषादीको अत्याधिक प्रयोग हुन्छ । यस्ता खानेकुरा तपाईं र हाम्रो भान्सामा आइपुग्छ । त्यसैले अहिले हामी जसरी स्वास्थ्यका लागि सागपात, फलफूल सेवन गर्छौं, त्यसले प्रतिकुल असर गर्ने संभावना बढी छ । अर्थात फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्ने भय छ ।
हामी सोच्छौ, राम्ररी खाएमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक तत्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले फलफूल तथा सागसब्जीको सेवन गर्छौ । जबकी यस्ता खानेकुरामा अत्याधिक मात्रामा किटनासक विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस्ता किटनाशक विषादी विशेषगरी बोटविरुवामा लागेको किरा मार्न प्रयोग हुने गर्दछ । यस्ता किटानशक औषधी साधारण पानीले धोएर जाँदैन । त्यसैले, अत्याधिक मात्रामा किटानशक औषधी प्रयोग गरिएको फलको सेवनले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अहिले मिर्गौलाको समस्यादेखि क्यान्सरसम्म जटिलता यस्तै खानपानले निम्त्याएको हो ।
किटानशक विषादीका् सेवनले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्छ । विभिन्न अध्ययनले जनाए अनुसार आहारमा किटनाशकको अत्याधिक प्रयोगले क्यान्सर, मिर्गौला तथा फोक्सो सम्बन्धि समस्या निम्तने गर्छ । बच्चामा विभिन्न किसिमका संक्रमण निम्त्याउने गर्छ । यसको सम्पर्कमा रहनाले बाल्यकालमै क्यान्सर, अटिज्म, एकाग्रता नहुने, सक्रियताको कमी जस्ता समस्या हुने गर्छ । गर्भवतीले किटनाशक युक्त फलफूल खाएमा यसले भ्रुणलाई समेत प्रभावित पार्छ । जसका कारण जन्मसम्बन्धि जटिलता हुन सक्छ । त्यसबाहेक, यसको सेवनले वाकवाकी लाग्ने,पखाला लाग्ने, पेट बौडिने, चक्कर आउने, तनाव, फूड प्वाइजनिङ्ग हुनसक्छ ।
किटनाशक एक किसिमको रसायन पदार्थ हो । यसको प्रयोग बोट विरुवामा लागेको किरा मार्न गरिन्छ । खेती किसानीमा अहिले किटनासको प्रयोग अनिवार्य जस्तै हुँदै आएको छ । आलु, गोलभेडा, सागसब्जी, खुर्सानी सबै अन्नबालीमा किटनासक प्रयोग गरिदै आएको छ । –कसरी पाउने किटनाशकबाट छुटकारा ?ः यसरी विषाक्त बनेर भित्रिने सागसब्जी, फलफूलबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने ? यसको सार्वोत्तम विकल्प भनेको जैविक विधीबाट उत्पादन गरिने सागसब्जी, फलफूल खरिद गर्नु हो । तर, अहिल जैविक विधीबाट उत्पादित फलफूल, सागसब्जी, अन्न हामीले सहजै प्राप्त गर्न सक्दैनौ । अर्काेतिर हामी आफ्नै खेतीबाली नहुन सक्छ ।
अर्थात हामी बजारमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा हामीले केही खानेकुरालाई भान्सामा नै शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ । भलै यो विधीबाट पूर्णत जैविक खानेकुरा प्राप्त गर्न नसकिएपनि विषाक्त तत्व हटाउन सकिन्छ । बजारबाट खरिद गरेर ल्याएपछि फलफूल तथा सागसब्जीलाई एउटै भाडोमा राखेर पर्याप्त मात्रामा पानी हाल्नु पर्छ । अब यसमा भिनेगर हालेर करिब १५ मिनेट छोड्नु पर्छ । त्यसपछि, उक्त भाडोबाट फलफूल तथा सागसब्जी हटाएर राम्ररी धुनु पर्छ । यो विधि अपनाएमा फलफूल तथा सागसब्जीबाट ९८ प्रतिशत सम्म किटनाशक औषधीलाई हटाउन सकिन्छ । त्यसैले, फलफूल तथा सागसब्जीमा प्रयोग गरिएको किटानशक औषधी हटाउने यो सरल उपाय मानिन्छ । –एसेन्सीको सहयोगमा